Wararka Soomaalida Qurbaha
SomaliTalk.com | Dec 13, 2002
Video Kusaabsan muranka NewZealand siyaasiyiintooda soo dhexgalay, tan oo la xiriirta soomaalida halkaas ku dhaqan:
. Hadalkii Duqa magaalada
. Muran Siyaasadeed
Luqada Soomaaliga oo lagu daray luqadaha mishiinada gada tigidhada Tareenada Minneapolis, USA
Duqa magaalada Christchurch, NewZealand, oo lagu tilmaamay"Somali warlord"
Duqa magaalada Christchurch, NewZealand, oo lagu tilmaamay "Qabqable Dagaal Soomaaliyeed" ["Somali warlord"]
Arin ku bilaabatay muran u dhexeeya dad Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Christchurch oo katirsan dalka NewZealand ayaa isu bedeshey dagaal xagga afka oo ka dhix oogmey laba siyaasiyiin oo sarsare oo reer NewZealand ah, taas oo weliba dalka NewZealand ka dhalisay arin siyaasadeed oo ay siweyn uga hadleen saxaafada dalkaasi.
Winston Peters oo ah hogaamiyaha New Zealand First ayaa ku eedeeyey duqa (Mayor) magaalada Christchurch Mayor Garry Moore in uu yahay qabqable dagaal Soomaaliyeed "Somali warlord"
Taas isagoo ka jawaab-celinaya Moore waxa uu yiri "dhimashadayda Winston Peters la igulama arki lahayn qol weynaha 'hall'", waxana uu ku tilmaamay in hogaamiya New Zealand First uu yahay sun "toxic".
Murankani waxa uu bilaabmay kaddib markii Peters uu ka jawaabey warbixin sheegeysey in booliisku ay baaritaan ku wadaan weerar loo geystey gawaari taas oo loo malaynayo in ay ka dhalatay muran la xiriira hoggaanka kaas oo u dhexeeya qabiilooyin Soomaaliyeed oo deggan magaalada Christchurch.
Hadalada Winston Peters ee muranka siyaasadeed ee ugu weyn ka aloosay dalka NewZealand waxaa kamida kuwan:
"Waxaad halkan ka heleysaa qaybo kala duwan oo qabiilooyin ah kuwaas oo wadanka keenay wixii ay isku hayeen ee ay ku burburiyeen dalkoodii," sidaas waxaa yiri Peters.
Isagoo Peters hadalkii sii wata waxa uu yiri "haddii taasi ay ka dhacayso NewZealand waxaa nasoo foodsaaray dhibaato xad-dhaaf ah oo waqti dheer soconeysa"
Tim Barnett oo ah MP xisbiga shaqaalaha oo laga soo doorto bartamaha Christchurch waxa uu erayada Peters ku tilmaamay midab-kala-sooc ["racist"], waxaana hadalkaas ku raacay Garry Moore.
Qofkii 19aad ee Soomaali ah oo lagu dilay K/AfrikaMayor
Ganacsade Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Diiriye Maxamuud Maxamed ayaa xalay lagu dilay gurigiisa oo ku yaala Johannesburg.... GUJI 13/12
"Waxaan xalinaa arimaheena anagoo u mareena dariiqeena, kala qaybinta jaaliyadeenuna ma ahan sida aan wax uga qabano halkan" sidaas waxaa yiri Moore, waxana uu intaas ku daray in aan Peters laga soo dhoweyn doonin magaalada Christchurch.
Duqa magaalada oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri arinta uu ka hadlayo Peters waa arin aad u yar taas oo ay booliiska arintaas ka shaqaynya ay jaaliyadu ku faraxsanyihiin.
Soomaalida NewZealand ee arimahan ka hadlay waxaa ka mid ah Faarax Nuur oo sheegay in aan duqa magaalada (mayor) Moore aan la barbar dhigi karin qabqablayaasha afrikaanka rasmiga ah. isagoo Faarax hadalka sii watana waxa uu yiri Moore waa hogaamiya wanaagsan oo ay Jaaliyada Soomaaliyeed qadariyaan, xushmeeyaana.
Faarax Nuur oo u jawaabayey Winston Peters waxa uu yiri "ma aaminsani Winston Peters in uu wax shaqo ah ku darsankaro jaaliyada Soomaaliyeed, xaqna uma laha in uu u sheego (Soomaalidu) in ay ku laabtaan meeshii ay kayimaadeen"
Peters waxa maanta oo Jimce ah kaqayb qaatay dood radio lagu qabtay taas oo wargeyska NewZealand City [nzcity] uu cinwaan kamida wararkii maanta ka dhigay "Peters explodes on air". Taas wargeyska oo sii wata waxa uu yiri waxaa arintu kululaatay kaddib markii weriye Mike Yardley weydiiyey Mr Peters waxa uu cadayn u hayo in magaalada Christchurch ay soo waaridey (keentay) "dagaal sokeeye iyo iska hor imaad". Mr Peters oo taas ka jawaabayana waxa uu yiri waxaa in badan waraysi la igula yeeshay raadiye, laakiin waxaad tahay kii ugu edebta daraa ee yaraa, isagoo taas sii watana waxa uu Peters kuyiri Yardley "aamus (shut up) shan daqiiqo, neef sanka ka qaado, waxaa laga yaabaa in aad wax baratide".
Waxa kale oo isla wargeyskaasi sheegay in afhayeen u hadlayey Soomaalida NewZealand oo ah Cabdi Casiis Cabdullah Xuseen uu sheegay in aad uga caraysan yihiin hadalka Peters, waxana uu hadalkiisa intaas ku daray in Peters uu jebinayo xeerarka qawaaniinta caalamiga ah.
Waxaa lagu qiyaasay in magaalada Christchurch ay ku dhaqan yihiin 400 oo Soomaali ah.
ISHA WARKA: http://onenews.nzoom.com/
Tarjumadii: Maxamed Cali